सिंगापुरविरुद्ध पिटिए बसन्त, खर्चिए बिनाविकेट ५४ रन ! (LIVE) - Everest Dainik - News from Nepal
सिंगापुरविरुद्ध पिटिए बसन्त, खर्चिए बिनाविकेट ५४ रन ! (LIVE)
काठमाडौं, साउन १२ । आइसीसी टि–२० विश्वकप एसिया क्षेत्र छनोट अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा सिंगापुरविरुद्ध नेपालका अनुभवी स्पिनर बसन्त रेग्मीले करियरकै खराब प्रदर्शन गरेका छन् । अघिल्लो खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका उनले आज भने ४ ओभरमा बिनाविके ५४ रन खर्चिएका छन् । त्यसक्रममा उनले ३ छक्का र ५ चौका दिए । यस्तै सन्दीप लामिछानेले पनि ३ ओभरमा बिनाविकेट ३४ रन दिइसकेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस सिंगापुरसँग मलेसिया पराजित, नेपाललाई फाइदा !
याे पनि पढ्नुस महंगा नेपाली बलर, सन्दीपले ३ ओभरमा दिए ३४ रन ! (LIVE)
ट्याग्स: नेपाल भर्सेस सिंगापुर, बसन्त रेग्मी